एक कुकुरलाई हेरचाह र हेरचाहको बारेमा फरक | कुकुरहरु को विश्व
Neutering र spaying बीच भिन्नता
यदि तपाईंसँग विपरीत लिंगका दुई वा बढी कुकुरहरू छन् भने, पक्कै तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ neutering र spaying बीच के फरक छ। जे भए पनि, अनावश्यक लिटरहरू रोक्नु देखभालकर्ताको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो।
1 क्यास्ट्रेशन भनेको के हो?
2 कास्टोरेशन को लाभ
3 नसबंदी भनेको के हो?
4 नसबंदीको फाइदा
5 पुन: प्राप्ति अवधि
6 कुन विधि छनौट गर्ने?
7 पोस्ट-अपरेटिव केयर
8 अपरेटिव लक्षणहरू
क्यास्ट्रेशन भनेको के हो?
पुरुषमा यो आधारित छ अंडकोष को हटाउने वा शल्य चिकित्सा हटाउने (orchiectomy)। प्रक्रियामा सामान्य एनेस्थेसिया समावेश छ। एक चीरा स्क्रोलोटल थैलीको अगाडि मात्र बनाईन्छ र दुबै अण्डकोष हटाइन्छ, थैलीलाई अस्थिर बनाउँदै।
कास्टोरेशन को लाभ
यस प्रक्रियाको साथ कुकुरको यौन आवेगलाई निषेध गरिएको छ र पुरुष हार्मोनको प्रभावसँग सम्बन्धित विरोधाभासहरूलाई रोक्न सकिन्छ, त्यसैले अन्य घरपालुवा जनावरहरूसँग मिल्नु सजिलो छ। यस अर्थमा यसले आक्रामकताका केही प्रकारहरूलाई कम गर्दछ वा हटाउँछ विशेष गरी पुरुष हर्मोनहरूद्वारा प्रभावित।
साथै टेस्टिकुलर क्यान्सरको सम्भावना हटाउँछ र ठूलो प्रोस्टेट रोग कम गर्दछ, दुई अत्यन्त सामान्य र गम्भीर समस्या पुरानो कुकुरहरूमा।
महिलामा यो एक नाजुक शल्य चिकित्सा हो र त्यहाँ यो गर्न दुई तरिकाहरू छन्। पहिलोलाई ओओफोरक्टोमी भनिन्छ र पेटको भित्तामा सानो चीराको माध्यमबाट दुबै अण्डाहरूलाई कुतियाबाट हटाउने समावेश गर्दछ। दोस्रोलाई डिम्बग्राहिस्ट्रेक्टोमी भनिन्छ, र यसले अण्डाशय र गर्भाशय दुबै हटाउँछ।
बिचको कस्ट्रेशन हर्मोनको उत्पादन रोक्छ, प्रजनन अंगहरूमा स्तन क्यान्सर र ट्यूमर रोक्दछ।
नसबंदी भनेको के हो?
पुरुषमा यो एक हो कास्ट्रेसन भन्दा कम आक्रामक शल्य विधि। यसले सेमिनिफेरस ट्युबुलहरू काट्ने समावेश गर्दछ, त्यो हो, ट्यूबहरू जसले अण्डकोषलाई लि (्ग (भासेक्टोमी) मा जोड्छ।
कुकुरको पुन: प्राप्ति neutering भन्दा छिटो छ। यस विधिले प्रोस्टेट रोगबाट ग्रस्त कुकुरको सम्भावनालाई कम गर्दछ। यद्यपि कुकुरको हार्मोन उत्पादन र सेक्स ड्राइव रोक्दैन, त्यसैले अन्य घरपालुवा जनावरहरूसँग उसको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन।
महिलामा कुत्राको नसबंदी फेलोपियन ट्यूबको लिगेसन समावेश गर्दछ, त्यो गर्भाशय नलिका हो।
यो कास्ट्रेसन भन्दा कम आक्रमक शल्यक्रिया हो र तपाईको रिकभरी छिटो छ। यसले गर्भाशय, अंडाशय र स्तन ट्यूमरको सम्भावनालाई कम गर्दछ। थप रूपमा, कुतिया उनको तातो चक्रको साथ जारी रहनेछ र उनको व्यवहार नरम हुँदैन।
पुन: प्राप्ति अवधि
किनभने तिनीहरू धेरै फरक प्रक्रियाहरू हुन्, पुन: प्राप्ति अवधिहरू दुई सर्जरीहरू बीच पनि भिन्न हुन्छन्।
क्यास्ट्रेशनमा, पुरुषहरू तिनीहरू एक हप्तामा पूर्ण रूपले निको हुन्छन् र दुई हप्ता सम्म महिलाहरु।
नसबंदी पुरुषहरूमा सामान्यतया दुई देखि तीन दिनमा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्। महिलाहरु पाँच दिन सम्म।
कुन विधि छनौट गर्ने?
तपाइँको घरपालुवा जनावरलाई पुर्‍याउने र spaying बीच निर्णयमा, यो कुकुरको मौलिक व्यवहारको आकलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं प्रबल, आक्रामक, वा गर्मीमा हुँदा भाग्नु पर्छ भने, कास्ट्रेसन सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यदि तपाईंको कुकुर सामान्य रूपमा शान्त छ भने, त्यसपछि कोमल विधि छनौट गर्नुहोस्, स्पाइंगको लागि रोज्नुहोस्।
धेरै घरपालुवा जनावर मालिकहरु आफ्नो कुकुरको postoperative लक्षणहरु को लागी तयार छन्। यहाँ, हामी हेरचाह सूचित गर्दछौं र कुकुरहरुमा नसबंदी सर्जरी पछि के सामान्य छ।
शल्यक्रिया प्रक्रिया पूरा भएपछि, र एनेस्थेसियाबाट पूर्ण पुनःप्राप्ति, कुकुरहरुलाई पशु चिकित्सा क्लिनिकबाट डिस्चार्ज गरियो शल्यक्रिया को दिन।
तपाईंको घरपालुवा जनावर छक्क पर्न सक्छन् जब उनीहरू घर पुग्छन्। सामान्य जस्तो, तपाईंको पाल्तु जनावरलाई पुनःप्राप्त गर्न १ and र २ hours घण्टा सम्मको आवश्यक पर्दछ सामान्य एनेस्थेसियाको। धेरैजसो जनावरहरू सामान्यमा फर्किन्छन् जब एनेस्थेसियाले आफ्नो प्रणाली पूर्ण रूपमा छोड्दछ।
शल्यक्रिया पछि, कुकुरहरूलाई धेरै आराम चाहिन्छ। तपाईंको घरपालुवा जनावर सामान्य भन्दा बढी सुत्नेछ। थोरै आक्रोशित वा आक्रामक पनि हुन सक्छ एनेस्थेसिया र पीडाको साइड इफेक्टका कारण।
त्यसकारण, यसलाई धेरै हेरफेर गर्नबाट जोगिनुहोस्किनकि यसले तपाईंलाई काट्न कोशिस गर्न सक्छ। यसलाई बच्चाहरू र अन्य घरपालुवा जनावरहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।
तपाईंको घरपालुवा जनावरमा हिंड्दा कम सन्तुलन हुनेछ, यसले भर्या .मा चढेर वा कारमा भित्र पस्नेछ र सामान्य भन्दा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले सहयोगको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईंको कुकुरलाई कार भित्र छिर्न मद्दत गर्नुहोस्किनकि अचानक आन्दोलनले तपाईंको टाँसाहरू बिगार्न सक्छ वा आन्तरिक रक्तस्राव निम्त्याउँछ।
टाँका र पेटको मांसपेशीहरूमा छाला तान्न बेवास्ता गर्दै कुकुरलाई धेरै ध्यानपूर्वक उठाउनुहोस्, तपाईंको हतियार कुकुरको छाती वरिपरि लपेट्नुहोस् र पछाडिको खुट्टा।
यदि तपाईंको कुकुर शल्यक्रियाको समयमा गर्मीमा थियो भने, तपाईंले उनलाई न्युटेरेट पुरुषबाट टाढा राख्नु पर्छ कम्तिमा दुई हप्ता को लागी। जब तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्न, तपाईं अझै छोटो समयको लागि अक्षुष्ट पुरुषहरूलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं आफ्नो घरपालुवा जनावर सीमित राख्नुहोस् शल्यक्रिया पछि पहिलो केही दिनको लागि एउटा सानो, असंगत कोठामा।
तपाईंको पालतू पशुहरूको रिकभरी कोठामा निम्न आईटमहरू राख्नुहोस्:
ओछ्यान कभर गरिएको हुनुपर्दछ, किनभने कुकुरहरू शल्यक्रिया पछि बान्ता गर्ने धेरै खतरा हुन्छन् एनेस्थेसियाको प्रभावका कारण, यसबाहेक, धेरै कुकुरहरू निन्द्रामा पिसाब गर्छन्। तपाईको घरपालुवा जनावर एनेस्थेसियाका साइड इफेक्टका कारण राम्ररी सुतिरहेको हुन सक्छ, र निद्राको बिरोधमा असंयमितताको अनुभव हुन सक्छ, विशेष गरी यदि प्रक्रियाको क्रममा उसले नसोधी तरल पदार्थ पायो भने।
यदि शल्यक्रिया पछि तपाईंको कुकुर निन्द्रामा छैन, तपाईं उहाँलाई निष्क्रिय र शान्त राख्नु को अप्रिय कार्य हुनेछ। बक्सिंग आवश्यक हुन सक्छ यदि तपाईंको कुकुरले हाम फाल्न र खेल्न कोसिस गर्‍यो भने।
Spaying र neutering तिनीहरू धेरै सुरक्षित शल्य चिकित्सा होयद्यपि, जटिलताहरू हुन सक्छ। एक हप्ताको लागि दिनमा एक पटक, चीरा क्षेत्र हेर्नुहोस्। अत्यधिक लालिमा वा सूजनको लागि जाँच गर्नुहोस्, डिस्चार्ज वा पुस, रगत, दुर्गन्ध, वा यदि चीरा साइट खुला छ। यी सबै लक्षणहरूले संक्रमणको सुरूवात संकेत गर्न सक्दछ।
सफा गर्ने वा चीरा साइटमा कुनै पनि सामयिक मलहम लागू गर्न कोसिस नगर्नुहोस्, जबसम्म तपाईंको पशु चिकित्सकले तोक्दैन। नियम अनुसार, दिनहरू बढ्दै जाँदा चीरा अझ राम्रो हुँदै जान्छ, साथै तपाईंको पाल्तु जनावरको ऊर्जा स्तर।
तपाईंको घरपालुवा जनावरले चीरा चाट्न वा चबाउन कोशिस नगर्न दिनुहोस्। हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले पुन: प्राप्ति अवधिको समयमा शंकु आकारको कलर लगाउनु हुन्छ, यसलाई पनि भनिन्छ एलिजाबेथन हार वा एक inflatable एक, जो तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि सानो र सुविधाजनक हो।
धेरै केसहरूमा, एनेस्थेसियाले गर्दा जनावरहरूलाई मतली लाग्न सक्छ, त्यसैले तपाईंको शल्यक्रिया पछि जब उहाँ घर पुग्नुहुन्छ तपाईंको घरपालुवा जनावरले खाँदैन।
तपाईंले बिस्तारै खाना पुनःप्रसार गर्नु पर्छ, यदि बान्ता भयो भने, अर्को दिन सम्म पर्खनुहोस्, बढि खाना दिनुहोस्। तपाईंको कुकुरलाई खाना र पानीको सामान्य मात्रा प्रदान गर्नुहोस् शल्यक्रिया पछिल्लो दिन।
तपाईंको घरपालुवा जनावरको भोक बिस्तारै शल्यक्रिया पछि २ hours घण्टा भित्र फर्किनेछ। त्यस समयमा डाइट परिवर्तन नगर्नुहोस्, वा उसलाई अनुपयुक्त खाना दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » जिज्ञासा » Neutering र spaying बीच भिन्नता
कुकुरहरूमा हार्मोनल ट्यूमर